MundoGEO magazine ugbu a na mbadamba - Geofumadas
- MundoGEO, ụlọ ọrụ ọzọ nnọchiteanya Ulo geospatial dị na mpaghara nkwukọrịta Latin America emeela ngwa abụọ ka ewee nwee ike ilele akwụkwọ akụkọ MundoGEO site na ngwaọrụ mkpanaka, ya na Apple iOS na gam akporo.
Naanị afọ a, magazin a jikọtara ọdịnaya nke magazin InfoGEO na InfoGNSSỌzọkwa, a gụnyere nsụgharị Bekee, Spanish na Portuguese. Na agbanyeghi na enwere ike ihu ya na Calameo, inwe ọdịnaya ejiri teknụzụ Flash gbochie ekwentị mkpanaaka ịnweta ya. Ugbu a, site na iji HTML5, a na-edozi okwu a na ihe magazin ndị na-agagharị agagharị na-eme site na iji mgbasa ozi na ịba ụba nke ọtụtụ nke ị ga-eme ụfọdụ mmega ahụ ebe ọ bụ na akụ na ọdịnaya agbakwunyere na-apụtaghị nke ọma.
Dịka enyi anyị, Eduardo Freitas, na-ekwu n'ụzọ nkịtị:
Mmalite nke akwụkwọ akụkọ ahụ na mbadamba mbadamba bụ nzọụkwụ gafere na MundoGEO akwụkwọ banyere njikọta nke ọtụtụ ụzọ iji nweta obodo jikọtara jikọtara ọnụ.
Site na nhọrọ mbadamba, anyị na-enye ụzọ ọzọ maka ndị mmadụ ịmara ma melite na ngwọta na teknụzụ geospatial, mana ugbu a, na-enwekwu mmekọrịta.
Ngwa ahụ ị nwere ike ịchọ iTunes, maka ndị na-eji iPad ma ọ bụ na Ụlọ Ahịa. Ozugbo etinyere ngwa ahụ, ị ​​ga-ahụ mbipụta izizi etinyela na usoro a. N'ime oge anyị ga-enwe ike ịhụ ndị gara aga na agbanyeghị na ngwa ahụ dị nso, anyị nwere olile anya na ọ na-akwadosi ike ya na nkwado ya tupu ụdị ọhụrụ.
Na ndị chọrọ ịhụ ya site na PC, ọ ga-ekwe omume na http://mundogeo.com/mundogeo67/.
Isi okwu IDE na-adọrọ adọrọ, nke ga-abụzi ngalaba na-adịgide adịgide n'okpuru aha IDE # Jikọọ.
N'akụkụ anyị, anyị na-anabata gị, ka ị na-aghọta onyinye ụlọ ọrụ dị ka nke a na-eweta nkwado nke mpaghara ahụ.
Budata ngwa si iTunes.
Budata ngwa si Ụlọ Ahịa.
Previous Post«Previous Nwee mmụọ nsọ! Akwụkwọ ozi nye ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ
Next Post Award mmeri MundoGEO # Jikọọ 2012Next »